XOG: Ma xiisad colaadeed oo u dhaxeysa Puntland & Somaliland ayaa ka jirta gobalka Sanaag?
BADHAN(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la sheegay in ay saacadihii u dambeeyey deegaanka Yube, ka wadeen ciidamada Somaliland ee halkaas dagan, kuwaas oo doonayay in ay u ruqaansadaan dhinaca magaalada Badhan ee xarunta gobalka Sanaag u ah Puntland.
Wararku waxay shegayaan in isku day arrintaasi ay doonayeen in ay sameeyaan ciidamada Somaliland uu socday saacadihii u dambeeyey, kaas oo ay gadaal kariixayeen taliska sare ee ciidamada Somaliland.
Ma jiraan warar dheeraad ah, halka Puntland sidaas oo kale ciidamada Xasilinta gobalka Sanaag, oo dhawaan kasoo goostay Somaliland ayaa kusugan saldhigyadooda ciidan, waxayna subaxnimadii hore ee maanta kormeer ku sameeyeen jidadka dhismaha wadada ee ay wado dawladda Puntland.
Maalmihii u dambeeyey xiisaddaha ku saleysan arrimaha gobalka Sanaag, ayaa haystay Somaliland, ka dib markii ay ciidamada Puntland weerar ku qaadeen gudoomiyihii ay usoo magacaabatay magaalada Badhan.
Gudoomiyaha ayaa loo diiday in uu galo Badhan, waxaana deegaanka Hadaaftimo ka dhacay iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac, kaas oo ay Puntland ku qabsatay gaarigii gudoomiyihii lasoo magacaabay.
Labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland ayey ahayd dhawaan markii ay sadex jeer iska horimaadyo kooban ku dhexmareen gobalka Sanaag, kuwaas oo ku wajahnaa arrimaha gacan ku heynta gobalkaas, waxaana muuqatay in Somaliland si nabadgalyo ah logala wareegay Barriga gobalkaas, sidaas oo kalena uu dagaal hubeysan kaga furan yahay Jabhadda Col, Caare.